Toutes les actualités – Page 30 – Madatopinfo
Mbola ny fanadihadiana sy ny famotoran’ny mpitandro filaminana no hamaritra ny marina mikasika ny sakoroka tao Toamasina, ny alarobia teo. Raha ny fampintambaovaon’ny mpiandraikitra ny seraseran’ny polisim-pirenena eo amin’ny Foibeny
KAOMININA AMBOHIMANGAKELY: Manomboka hita taratra ny fampandrosoana
Fokontany 18 no mandrafitra ny Kaominina ambanivohitra Ambohimangakely. Vao nanomboka nandray ny toerany amin’ny maha Ben’ny Tanàna azy Andriamatoa Radafy Thierry na i Bota dia avy hatrany dia nanatanteraka ireo
Ao anatin’ny herinandro fahadimy amin’ny fahamehana ara-pahasalamana isika eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Mbola tsy miverina an-dakilasy ny mpianatra eny anivon’ny oniversite raha ny eto Antananarivo no resahana, manoloana izany
Olona iray nahitana soritraretina no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus aty Ambatondrazaka, ny talata 26 Mey teo. Efa mandray
Toerana malaza, ifamezivezen’ny olona maro ny tsenan’Anosibe. Vao nanomboka ny vanim-potoana fahamehana ara-pahasalamana teto amintsika dia efa nandray ny andraikiny
Potika vokatry ny fandalovan’ny rano be ny volana febroary lasa teo ny ankamaroan’ireo fotodrafitrasan’ny fambolenana, faritra Alaotra Mangoro. Betsaka ireo
Hiavaka ny fankalazan’ny Malagasy ny fetim-pirenena amin’ity taona ity noho ny fisian’ny valanaretina covid-19 eto amintsika. Raha eny amin’ny kianjaben’ny
“Galana, miaro ny fahasalaman’ny mpandeha taxi-be”. Amin’izao vanim-potoanan’ny fahamehana ara-pahasalamana sy ny fepetra fihibohana amin’ny ampahany mihatra eto Antananarivo izao,